ဝိုင် အရက် မိတ်ဆက် လမ်းညွှန် | Freedom News Group
၀ိုင် အရက် မိတ်ဆက် လမ်းညွှန်
by FNG on August 2, 2010	ယနေ့ ခောတ်မှာ တော့ အကောင်းစား ၀ိုင် အရက်တွေ ကို
မြေထဲပင်လယ်ဒေသ ဒါမှမဟုတ် ပြင်သစ် နိုင်ငံ
က ထွက်ရှိတယ် ဆိုပေမယ် ၀ိုင်အရက် စတင်ဖြစ်ထွန်း ရာ
နေရာ ကို အခုခောတ် ကော်ကေးဆပ် အရှေ့ပိုင်း ၊
ဂျော်ဂျီယာ နဲ့အီရန်မြောက် ပိုင်း ဒေသ တွေလို့ သတ်မှတ် ကြပါတယ်။
အလျှဉ်းသင့် သလို ၀ိုင်အရက် သမိုင်း ကြောင်း နဲ့ထုတ်လုပ်ပုံ
အဆင့်ဆင့် တွေ ကို မိတ် ဆက်ပေးပါမယ် ။
ဒီတစ်ပတ်မှာ တော့ နာမည် ကျော် အမေရိကန် ၀ိုင် အရက်
တစ် မျိုး ကို မိတ် ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်
နိုင်ငံရဲ့နာမည် ကျော် ၀ိုင်တွေ ထွက်ရှိ ရာ Napa Valley
ဒေသထွက် ၀ိုင် တစ်မျိုး ကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
Napa Valley ဆိုတာ ဆန်ဖရန် စစ္စကို ဘေး ဧရိယာ မြောက် ဘက်ပိုင်း မှာ ရှိတဲ့ ဒေသတစ်ခု ပါ ၀ိုင် အရက်
ထုတ်လုပ်ရာ မှာ လိုအပ်တဲ့ စပျစ်သီး အများ အပြား စိုက်ပျိုးတဲ့ ၀ိုင် စပျစ်ခြံ ( Vineyard ) တွေ အများအပျား
ရှိတဲ့ နေရာ ပေါ့ ။ ဒီဒေသ ဟာ ပိစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ နဲ့ နီးပြီး နွေးသမ ဒေသ ဖြစ်နေ တာကြောင့် စပျစ်သီးမှည့် ဖြစ်
ဖို့ အတွက် လိုအပ် တဲ့ အပူအအေး ဟာ မြေထဲပင် လယ်ဒေသ လို ဖြစ်နေ တာကြောင့် အကောင်းစား ၀ိုင် အရက် တွေ ထွက်ရှိရခြင်း လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာ တော့ Napa Valley ဒေသက ထွက်ရှိ တဲ့ ၀ိုင် အရက် အမှတ် တံဆိပ်ပေါင်း လေးဆယ် ကျော်
ကတည်းက Beringer ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ Beringer ဟာ ၁၈၇၀ ခုနှစ် လောက်ကတည်းက
Napa Valley ဒေသမှာ စပျစ်ခြံ စိုက်ပျိုးပြီး ၀ိုင် အရက် ကို ထုတ်လုပ် လာတာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ မှ ထုတ်လုပ်သည့် ၀ိုင် အရက်များ ရောင်းချရာ ဆိုင်
Beringer က ထုတ်တဲ့ Private Reserve Cabernet တွေဟာ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကျော်ထိ ဈေးရှိပါတယ်။ 2003
Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon Napa Valley 375ml ဟာ ဒေါ်လာ ခြောက်ဆယ် ဈေးရှိ
ပြီး Red Wine အမျိူးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်ခံပွဲ တွေ မှာ အသုံးများ ပြီး စသောက်ခြင်းမှာ တော့ မွှေးမွှေးအီအီ အနံ့ 
လေး နဲ့ ဖမ်းစား မှာ ပါ။ ပုံမှန် မှာ တော့ ချိုမြမြ အရသာ လေးဖြစ်ပေမယ့် ။ အမြည်း နဲ့ 
တခြား အစားအသောက် တွေ နဲ့ ရောနှော စား တဲ့ အခါမှာ တော့ ခါးသက်သက် လို လေး ဖြစ်သွား တာ
ကို ခံစားရမှာ ပါ။ ၀ိုင်သောက် တဲ့ အတွေ့ အကြုံ ရှိ သူ တစ်ယောက် ကတော့ တစ်ညတာ အတွက် ဒီတစ်
ပုလင်း ဟာ တစ်ည တာ ဖူလုံ ပေမယ့် အလေ့အထ မရှိ သူ တစ်ယောက် အနေ နဲ Wine Glass နှစ် ခွက် လောက် ဆို ဖူလုံ နေပါပြီ ။
Beringer ၀ိုင် အရက် ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ အ(ယ်)ကို ဟော နှုန်း ကြောင့် နာမည် ကျော် ဂေါက်သီးရိုက် အကျော်အမော်တွေ နှစ်ခြိုက်
ဒီတပတ် တော့ ဒီလောက် ပါပဲ ။ နောက် အပတ် တွေ မှာ ဆက်တွေ့ ကြတာ ပေါ့ ။ Freedom News Group ရဲ့ 
ပရိသတ် အနေ နဲ့လည်း သင် တို့ ရဲ့Wine Tasting ကို မျှ ဝေခြင်တယ် ဆို ရင် ရေးသား ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ၀ိုင် သောက် တဲ့ အခါ တိုင်း Wine Glass နဲ့သာသောက် သင့်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် White Wine Glass
(ဒါမှမဟုတ်) Red Wine Glass စသည်ဖြင့် ခွဲ ခြား ပြီး သောက် သင့် ပါတယ်။ အရေးအကြီး ဆုံး အချက် ကို မှာ ချင်
တာက တော့ ၀ိုင် သောက် တဲ့ အခါ တိုင်း ဖန်ခွက် ထဲ ကို အပြည့် မထည့် မိဖို့ ပါပဲ
ခွက် ရဲ့သုံးပုံ တစ်ပုံ လောက် ဟာ သင့် ရဲ့လူကြီး လူကောင်း ပီသမှု ကို အပြည့်စုံဆုံး ပြ နိုင်ပါတယ်။
From: အဖျော်ယမကာ	← စီးပွားရေး အချက်အချာကျရာ ရန်ကုန်မြို့ အနီးတွင် တပ်ကို တပ်က ပြန်ဝိုင်းထား
ချယ်(လ)ဆီ ကလင်တန် ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ →
freedom news group	#
We’ll be how to store wine and selling wine, about french wine and Wine auction around the world article are published tomorrow. Thanks for our Dining and Wine fans . Good night and Luck on Wine !
September 18, 2010	henry	#
jokerz you might be Nico……
Yes, i am from Qasr AL Sarab….How did you know me??????
September 17, 2010	jokerz	#
qasr al sarab မှ henry ဟုတ်ပါရဲ့လား ။
August 14, 2010	henry	#
Thanks for the suggseted…i should find out that wine and try it for sure when i had chance.
August 7, 2010	Burma Wine Club	#
Cabernet Sauvignon isavery bold and assertive wine that has potential to overwhelm light and delicate dishes.
August 6, 2010	Joseph the Bartender	#
I would like to suggest you for Ferrari Carano distllery Cabernet Sauvignon . Ferrari is the worlds famous brand of sauvignon. Above four star hotel customer is two day before reservation for sauvignon. They are also sale at least five years old F C wine. some liquor store sale F C but one or under 12 months. Two or older is the good taste .
I hope you will be taste F C .
Joseph the Bartender
August 6, 2010	henry	#
Thanks you so much for gave to me tips that some cabernet are dark sweet taste while drinking,Actually,i am quite like little sweet taste in wine,like German Riesling,so i just wanted to ask your favour that pls recommend me some of Cabernet’s wine with sweet tast ..i really like to try it.
August 4, 2010	henry	#
Thanks you so much for gave to me tips that some cabernet are dark sweet taste while drinking,Actually,i am quite like little sweet taste in wine,like German Riesling,so i just wanted to ask your favour that pls recommend me some of Cabernet’s wine with sweet wine..i really like to try it.
August 4, 2010	Joseph the Bartrender	#
Dear Freedom News Group
Very appreciated for your writing about wine tasting. Keep up the good work .Most of the world’s famous newspaper are writing about Dinning and wine introduce everyday .
@ Henery : according to the Henery’s comment , Dear Mr. Henery I think you are the fans of Wine. Good Job.
But some of the Cabernet Sauvignon wine are dark sweet taste while drinking . After drinking you havealit’ bit of Bitter sweet taste. It’savalue of Cabernet Sauvignon , completly different others Cabernet .
August 3, 2010	henry	#
First of all, just want to say thanks for sharing wine knowledge to Burmese reader.However,a few comments to add regarding your message about wine.
1.စသောက်ခြင်းမှာ တော့ မွှေးမွှေးအီအီ အနံ့ 
လေး နဲ့ ဖမ်းစား မှာ ပါ။ ပုံမှန် မှာ တော့ ချိုမြမြ အရသာ လေးဖြစ်ပေမယ့် ။cabernet sauvignon is grape viriety that never come out sweet tast.Most of these wines did show distinctly stronger aromas 20 to 30 minutes after pouring. There was alsoawide range of styles, from fruity with no wood to spicy and oak-dominated; from lean and elegant to brawny and rustic. Who those do not had much experiences about wine,will say,it just bitter and tannins tast.
2.အရေးအကြီး ဆုံး အချက် ကို မှာ ချင်
ခွက် ရဲ့သုံးပုံ တစ်ပုံ လောက် ဟာ သင့် ရဲ့လူကြီး လူကောင်း ပီသမှု ကို အပြည့်စုံဆုံး ပြ နိုင်ပါတယ်။Actually,Most of the wine lover will enjoying wine slowly to break alcohol and to get aroma and after tast.nothing to do with gentelmen or what so ever.
Cabernet savignon grape variety is netive form Bondeaux left bank Medoc region where most of the world expensive wine produce such as Latour,Margeaux,Mouton and many more..and you right, Napa valley as well after Medoc.
Hope you will take possitive what i comments
August 2, 2010	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,511,087 hits
#Nelson Mandela should born and raise in Utah. lnkd.in/b-mPUbP 1 hour ago
Hezbollah official Hassan Al-Laqees assassinated outside his Beirut home, says Hezbollah-run Al Manar television. 1 day ago
Over 300,000 People March In Kiev Against Regime huff.to/1cfDMQR via @HuffPostWorld3days ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar's president calls for more investment, development aid from PhilippinesMyanmar refugees face land challenges on returnSpecial Report: Thailand secretly supplies Myanmar refugees to trafficking ringsUS seeks greater Myanmar military trainingMyanmar losing forests at fast pace, say reportsWant Burma info in your inbox each morning?
Get the daily news enter your mail Join 566 other followers